Home - So
so loo hormariyo Isla xisaabtanka
Ku saabsan IAAAP
IAAAP waxay dhistay saldhig adag oo lagu taageerayo muwaadiniinta Soomaaliyeed dadaalka ay ku hayaan in ay la xisaabtamaan dowladda. Ujeedadu waxay tahay in ay wargeliso bulshada Soomaaliyeed, bulshada rayidka ah, dowladaha iyo hay'adaha horumarinta caalamiga ah ee ku saabsan islaxisaabtanka Soomaaliya, iyo in ay saameyn ku yeeshaan hay'adaha iyo maamul-wanaagga. Waa barnaamij afar sano ah oo lagu maalgeliyo deeq UK ah oo ay maamusho Mott MacDonald.
Hirgelinta iyo Falanqaynta Barnaamijka Islaxisaabtanka (IAAAP) waxaa ujeedkiisu yahay in la abuuro lana hormariyo saldhig caddayn ah oo wargalin, saameyn ku yeelan kara oo taageeraya qaybo badan oo ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah si ay dawladda u qabtaan islaxisaabtamiin badan. Waxay sidaas u sameeyaan iyada oo loo marayo:
Aqoonsiga iyo hirgelinta ficilada horumarinta muddada dheer, geedi socodka ama hay'adaha wax ka bedeli kara maamulka dowladaha danaha guud ee danaha dadweynaha
Horumarinta fursadaha iyo qalabeynta muwaadiniinta Soomaaliyeed si ay u daba galaan arimaha islaxisaabtanka
Aqoonsiga iyo awoodgelinta tartamayaasha ee islaxisaabtanka Soomaaliya si ay u sii wadaan kor u qaadista islaxisaabtanka ka baxsan baarxadda barnaamijka IAAAP
Taageeridda xukuumadda si ay si wanaagsan ugu maareyso mas'uuliyadaha islaxisaabtanka iyo in ay fuliyaan waajibaadkooda ku aaddan shacabka Soomaaliyeed
Kobcinta ka qaybqaadashada caalamka si loo fududeeyo islaxisaabtanka weyn ee gudaha Soomaaliya.
Wasaaradda Warfaafinta waxay la kulantaa IAAAP
Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo IAAAP waxay saxiixeen qoraal ku saabsan hirgelinta barnaamijka Dowlad Furan ee (OGI)...
Dhowaan ma booqatay kheyraad IAAAP?
Let us know how you plan to use it by completing a short survey.
Warar dheeraad ah ...
The Somali Advocacy Network
IAAAP waxay la shaqaysaa dhowr shirkadood si loo baaro, loo diiwaan geliyo, loona hirgeliyo mashaariicda looga danleeyahay in la dhiso caddaynta islaxisaabtanka Soomaaliya iyo in muwaadiniinta ay helaan kuwa iyaga dareenkooda matala. Dhammaan wadahawlgalayaashu waxay leeyihiin faham xoogan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya, oo ay ku jiraan shabakadaha iyo shabakadaha iyaga u gaar ah, iyo saameynta kordhinta helitaanka macluumaadka
BBC Media Action waxaay isticmaaleysa awoodda warbaahinta iyo isgaarsiinta si loo yareeyo saboolnimada iyo taageerida dadka fahamka xuquuqdooda. BBC MA waxay wada shaqeyn la leedahay wariyeyaasha, dawladaha, ururada aan dowliga ahayn iyo deeq bixiyeyaasha si ay dadka uga caawiyaan inay fahmaan dhacdooyinka, inay wadahadal sameeyaan oo ay qaataan tallaabooyin lagu horumarinayo noloshooda.
Waxaanu gaarnaa in ka badan 200 milyan oo qof oo Afrika, Aasiya, Bariga Dhexe iyo Yurub iyada oo loo marayo, bandhigyo, barnaamijyo raadiye iyo barnaamijyo telefishan, dhawaaqyada adeegga dadweynaha, adeegga taleefanka gacanta iyo isgaarsiinta wadahadalka waji ka waji.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan BBC MA
KATUNI Consulting waa shirkad la talin dhinaca cilmi-baarista ah oo la aasaasay 2009. Waxay ku taallaa Nayroobi (Kenya) waxayna xafiis ka furanaysaa Hargaysa. Waxay ka shaqeysay Soomaaliya guud ahaan toddobadii sano ee la soo dhaafay, iyaga oo si dhow ula shaqeynaya shabakadaha xirfadlayaasha ah ee degaanka si loo horumariyo aqoonta iyo fahamka khilaafaadka deegaanka iyo siyaasadda. Waxay bixisaa falanqayn, xalal cusub, iyo tababar. KATUNI waxay leedahay kartida saadka ee ay ku shaqeyn karto guud ahaan Soomaaliya waxayna qabatay waxaas oo dhan toddobadii sanno ee la soo dhaafay. Agaasimaha Guud ee Katundi, Joakim Gundel, waa khabiir qadarin leh oo ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha amniga Soomaaliya, isaga oo horay uga tirsanaa Kooxda Korjoogteynta Qaramada Midoowbe ee Soomaaliya iyo Eritrea.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan KATUNI
Tana Copenhagen, oo la aasaasay sannadkii 2006, waa shirkad tayo sare leh oo Danmark ah oo bixisa adeegyo talobixin iyo farsamo oo ku saabsan maamulka, xasilinta iyo horumarinta qaybaha gaarka loo leeyahay. Tana waxay ka shaqeyneysey 32 dalal, iyo waddamo qallafsan oo Afrikaan ah. Sannadkii 2016, Tana waxay xafiis ka furtay Nayroobi, Kenya si ay u fududeyso mashaariicda IAAAP iyo shaqooyinka kale ee Soomaaliya.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Tana
TSOL waa shirkad cilmi baaris oo hormarsan gudaha Soomaaliya, oo leh faham qotodheer ee bulshada Soomaaliyeed. Khibradda TSOL waxay ku jirtaa cilmi baarista, maareyn mashruuc, tababbar iyo istaraatiijiyadeed iyada oo loo marayo hab aad u firfircoon dadka degaanka ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan TSOL
Jaamacadda Gobolka Puntland
Jaamacadda Gobolka Puntland, oo la aasaasay 1999 , waxay leedahay shan laamood, oo waxay ka shaqeysaa sidii ay u bixin laheyd waxbarasho heerka ugu wanaagsan ee la heli karo, oo la awoodi karo, heerkeedu na yahay mid caalami ah heer sareeyso ah oo loogu talogalay dhammaan dadka Soomaaliyeed. PSU waxaa loogu talagalay in lagu siiyo jiilka dhalinyarada barnaamij waxbarasho oo suurtagal ah iyo horumarka heerarka waxbarasho, farsamooyinka cusub iyo teknoolojiyada. PSU waxay la shaqaysaa hay'ado badan oo caalami ah sida Midowga Yurub iyo Jaamacadda Pennsylvania.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan PSU
Shabakadda Wacyigelinta Soomaaliya (SAN)
Shabakadda Wacyigelinta Soomaaliya (SAN), oo la aasaasay 2013, waxay ku taallaa Soomaaliya waxayna leedahay xubno ka socda Yurub, Maraykanka iyo wadamo kale oo Afrikaan ah. Waxay raadineysaa inay Soomaaliya ku aragto xubin firfircoon oo ka tirsan beesha caalamka. Xubnaha, oo ay ka mid yihiin aqoonyahannada, ganacsatada, haweenka, dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, iyo kuwa bulshada rayidka ah, waxay leeyihiin waayo aragnimo ballaaran oo ku wajahan maaddooyinkooda ee kala duuwan. SAN wexeey ujeedkeedu tahay in ay isku keento xubnahaasi si ay uga shaqeeyaan dadaallada nabadeed ee ka caawin doona Soomaaliya in ay dhisanto oo ay sii kobciso dhaqaalaheeda degaanka ah si ay u keento nabadda iyo xasiloonida dalka iyo in ay siiso fursado shaqo oo loogu talagalay dhalinyarada ee dalka ku nool.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan SAN
SORADI waa hay'ad cilmi baaris oo madaxbannaan oo horumarineed, iyada oo ujeedadeedu ay tahay horumarinta dhaqanka dimuqraadiyadda iyo horumarka dhaqaalaha ee Somaliland iyo Geeska Afrika. SORADI waxaa loo aqoonsan yahay in ay tahay xarun cilmi baaris tayo leh, xarun cusub oo lashaqeeyso abuurista dhaqanka ganacsiga, wakiilka wareejinta aqoonta iyo dabeecada dhaqanka dimoqraadiga ah ee gobolka. Hadafkeedu waa in uu fuliyo waxqabadyo kor u qaada dimuqraadiyeynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Somaliland iyo gobolka Bariga Afrika.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan SORADI
Hay'adda Caalamiga ee Nabadda iyo Nabadgalyada (GLOPPI)
Hay'adda Caalamiga ee Nabadda iyo Nabadgalyada (GLOPPI) waa urur caalami ah oo u dadaalaya sidii loo tirtiri lahaa sababaha iyo saameynta colaadaha, maamul xumada, iyo in la yareeyo saboolnimada iyo cimilada la xiriir isbedelka cimilada. Iyada oo lala kaashanayo dadka kale, GLOPPI waxay u shaqaysaa in ay xoojiso kuwa saboolka ah oo la mamnuucay lagana reebay inay kunooladhaan nabad iyo barwaaqo.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan GLOPPI
Mashruuca Dawlad Furan (OGI)
Mashruuca Dawlad Furan (OGI) waa qorshe xukuumadeed oo looga golleeyahay in Soomaaliya ay kaalin hoggaamineed ka qaadato sidii loo gaari lahaa daahfurnaan. Waxay u shaqeysaa in ay la dagaallanto musuqmaasuqa gudaha Soomaaliya iyadoo la casriyeynayo sida macluumaadka loo wadaagayo. Shaqadani waxay horseedi doontaa dowlad wada shaqayn, oo loo dhan yahay oo la la xisaabtamo – muhiim na u ah horumarka joogtada ah iyo kordhinta dimuqraadiyeynta.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan OGI
"Codka kuwa aan Cood ahayn": Barashada mashruuca SORADI ee si loo xoojiyo xisaabtanka Hargeisa
Islaxisaabtanka degsiimooyinka aan rasmiga ahayn
Daahfurnaan iyo Helitaanka Macluumaadka
Kheyraad dheeri ...
Hirgelinta iyo Falanqaynta Barnaamijka Islaxisaabtanka (IAAAP) waa barnaamij afar sano soconaya oo ah barnaamijka deeq UK ah oo ujeedkiisu yahay soo saarista iyo kor u qaadista saldhig caddayn ah oo wargalin, saameyn ku yeelan kara taageerada dad badan oo Soomaali ah iyo kuwo caalamiga ah si ay u qabtaan dawlad ay la xisaabtamaan.